INTA JEER EE AY KU JIRAAN BIYAHA QUUTUL-DARUURIGA AH: INTA LAGU JIRO UBAX, DILLAAC, QADHAADH - STRAWBERRIES
Ugu Weyn Ee Strawberries
Talooyin iyo talooyin loogu talagalay waraabinta strawberries
Haddii aad rabto inaad uruuriso strawberries casiir leh iyo xitaa, iyo xitaa tiro badan, sariirta waa in la nadiifiyaa wakhti go'an. Xaglaha qarxa ee dhirta ayaan awoodin in ay nuugaan qoyaan ka soo qoto dheer, sidaa darteed, marka dhulku dillaaco, waxay ku dhacaan fuuqbax. Laakiin ma ku shubi kartaa duurka. Aan aragno fiiri inta jeer ee uu biyahaa strawberries ku jiro inta lagu jiro ubax iyo Bisaylkiisa ee berry iyo in ay suurtagal tahay in la isku daro nidaamyadaan dharka.
Goorta ay biyo noqoto
Cagaarshowgu waa dhirta qoyaan-jecel, sidaas darteed, muddada u dhaxaysa bilaha 5aad illaa 9aad waxaa jira baahi degdeg ah oo loogu talagalay waraabinta joogtada ah. Xiisadooda waxay ku xiran tahay cimilada iyo cimilada.
Ma taqaanaa? Xaqiiq ahaan, miraha strawberry waa miro yar, oo ah botanistaha oo ku magacawda "nuts", iyo dhogorta berriga, oo ah nooca caadiga ah ee noo ah, waa xabbad keli ah.
Bilowga xilli sii kordhaya, marka aanay weli kululayn dibedda, waxaa lagu talinayaa in la dhiso dhirta strawberry ugu yaraan toddobaadkii hal mar. Maalmaha kulul, hannaanka qoyaanka waa in la xoojiyaa ilaa 2-3 jeer. Haddii xayawaankaaga xayawaankaaga leh oo si dhaqso ah u dhaafaan biyaha, xagaaga xagaaga waa in lagu celiyaa maalin kasta. Iyada oo daryeelkan, saddexda sano ee ugu horeeya, saliida strawberry si dhakhso ah ayey u koraan oo si habboon u koraan. Waxay samayn doonaan hababka dheef-shiid kiimikaad sax ah, ka dib goosashada ka dibna waxaa jiri doona wax badan oo ka mid ah bilowga miraha mustaqbalka.
Xilliga dayrta, qoyaan xad dhaafka ah wuxuu u horseedi karaa suuska xididka iyo horumarka jirooyinka. Sidaa daraadeed, si aan loo daboolin dhaqanka halista, waa in la yareeyo ugu yaraan biyaha. Maalmaha qaboobaha ah maalmaha sagaalaad, sariirta waa la qallajin karaa toddoba maalmood oo kasta, iyo cimilada roobka maahan muhiim.
Beerto strawberry, oo ku taalla meelaha qorraxdu ka baxdo, ayaa badanaa la waraabiyaa inta badan kuwa hadhka ah. Natiijo ahaan, silsilado ficil-celin culus oo iyaga ka yimaada waxay u bislaadaan berry, waxay ku kobcayaan sonkorta, glucose iyo fructose, taas oo siinaysa macaan waxayna kobcisaa dhadhanka.
Waa muhiim! Hal meel ah strawberries ayaa kori kara ilaa afar sano. Kadibna waxay u baahan tahay in lagu beddelo meelaha cusub ee la horumariyey.
Haddii guga uu ahaa mid qalalan, waa lagama maarmaan in la baadho duurka inta ka dhiman qeybta labaad ee bisha Abriil. Xilliyada qaboobaha illaa bartamihii xagaaga, dhirta waxaa la qallajin karaa saddex jeer bishiiba. Waxa ugu muhiimsan waa in diiradda lagu saaro gobolka carrada iyo, dabcan, strawberries.
Ogow noocyada noocyada qudaarta sida "Asia", "Albion", "Malvina", "Lord", "Marshal", Eliana, "Ruushka", "Elizabeth 2", "Gigantella", "Kimberly" iyo "Queen" .
Dhammaan nidaamyada biyaha ee sariirta strawberry waa suurad wacan inay sameyso subaxa ama fiidkii. Laakiin isku day in aad biyaha ka ilaaliso biyaha dalagga.
Maxuu noqonayaa biyaha
Milkiilayaal badan, si ay u fududeeyaan habka qoyaanka strawberries, tuubo tuubo biyo tuubo ka sariirta beerta. Dabcan, berry ah oo ku saabsan abuurka noocan oo kale ah ayaa noqon doona, laakiin waraabinta biyo qabow ayaa si weyn uga niyad jabsan khabiiro. Fikraddooda, khatarta ah inay qaaddo infekshinada faafa ayaa kor u kacda, iyo nidaamka xididka geedka ayaa daciif ah, taas oo ah, taas oo iyana, saameyn ku leh tirada iyo tayada dalagga.
Waxaa ugu wanaagsan in biyaha lagu soo ururiyo taangiyada waaweyn si loo dejiyo iyo kululaynta. Sidaa daraadeed, haddii aadan rabin in aad naftaada ku dhejisid baaldiyo buuxa, tuubo tuubo ayaa sidoo kale lagu hagaajin karaa foornada ama tuubada. Dheecaan kulayl ah wuxuu saameynayaa hormoonnada koritaanka, kicinta dhaqdhaqaaqooda. Sidaas darteed, baadiyaha si fiican u koraan oo waxaa lagu kala saari jiray Bisaylkii hore ee berry.
Ma taqaanaa? Dumar yar ayaa ogsoon in strawberries ay bedeli karaan kiriimka wajiga ugu qaalisan. Xaqiiqdu waxay tahay in miro yar oo tiro badan ay ka kooban tahay bakteeriyo, taas oo ka masuul ah soo saarista kolajka. Taasi waa sababta ay u tahay faa'iido aad u leedahay in aad diyaariso maaskaro. Saameyntu waxay la mid tahay mid ka mid ah calaamada iyo ku dhawaad ​​maaha alaabta la isku qurxiyo.
Si aad u ogaatid sida loo biyahayo strawberries, waxaa muhiim ah in la fahmo shuruudaha aasaasiga ah ee warshadda mudo gaar ah oo horumarineed. Ka dib oo dhan, qof jecel inuu ku cuno on this berry, malaha hore u qiyaaseen in la'aanta qoyaan, sida xad-dhaaf ah, waxay saameeyaa sifooyinka jilicsan. Tixgeli marxaladaha dhammaan waxyaalaha laysku qurxiyo dhaqanka.
Ka dib markaad degto
Si loo hirgeliyo geeddi-socodka dhalinyarada leh tendrils si ay u sameeyaan caws ubax, waxaa muhiim u ah iyaga si loo hubiyo heer ku filan qoyaanka dhulka. Bannaanka loo yaqaan "tastes" ayaa lagula talinayaa inaysan dhaafin xadiga biyaha ee ku shubay xididada, sababtoo ah geedi socodka tallaalka badiyaa wuxuu dhacaa xilliga guga ama dayrta, marka uusan kululayn. Labada usbuuc ee ugu horreeya ka dib markii la beero, waxaa lagu talinayaa in ay ku shubaan nus litir oo biyo diirran ka yar baadiyaha kasta. Waxaa intaa dheer, waa in la sameeyo habdhaqan ilaa saddex jeer maalintii. Mustaqbalka, lakabyada koraya waa in loo qaybiyaa toddobaadle laga bilaabo 10 ilaa 12 litir oo dareere ah halkii mitir labajibbaaran.
Waa muhiim! Roobabka dheer iyo cimilada qabow ee qabow, hubi inaad daboosho qudaarta cawska leh. Waxay gacan ka geysan doontaa abuuritaanka microclimate lagama maarmaanka u ah sii kordhinta dabdhaliyayaasha iyo xoojinta xididada, iyo sidoo kale ka hortagga horumarinta cudurada fangas iyo caabuqyada putrefactive.
Milkiilayaasha badan ee beeraha strawberry ee marxaladaha hore ee horumarinta dhirta dhalinyarada isticmaali rusheeyaha iibsaday. Hase yeeshee, isticmaalkooda ayaa loo oggol yahay oo kaliya ka hor intaan la duubin, sababtoo ah khatarta ka timaadda manka ee kaamilada ayaa aad u sarreeya.
Sida loo abuuro strawberries ka dib markii laga beerto waxay ku xiran tahay inta badan astaamaha ciidda. Tusaale ahaan, sanduuqa waxaa laga rabaa 50% qoyaan, iyo dhuuban - laga bilaabo 60%. Khubarada waxay kugula talinayaan in ay nuugaan dhirta dhif ah, laakiin aad u badan, sababtoo ah waraabin badan iyo yar oo aan la siin wax saameyn ah.
Bilowga xilli sii kordhaya ee strawberries, fiiro gaar ah waa in la siiyaa ciidda. Ka dib markaad waraabinayso waa suurad wacan in la daboolo iyo si dhexdhexaad ah lagama maarmaanka u ah cawska. Nidaamyadani waxay hagaajin doonaan aargoosiga xididada waxayna u oggolaanayaan inay si xoog leh u quudiyaan. Xasuuso in dusha sare ee u baahan yahay biyo ka yar kan culus.
Inta lagu jiro ubax
Haddii ay marxaladdan horumarinta duurka u ma siinayaan nidaamka biyo-lagama maarmaanka ah, khasaaraha weyn ee dhalidda iyo dhar-dhaqashada xooggan ee dhaqanka waa suurtagal. Si looga fogaado tan, mitir kasta labajibbaaran ee sariiraha waxaad u baahan tahay inaad ku shubto 20-25 litir oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Lemon waxaa ku jira sonkor badan oo ka badan strawberries.
Isbedelada qaarkood ee ku saabsan qadarka dareeraha shubay waxay ka dhigi kartaa sifooyinka jirka ee kiimikada ee substrate. Laakiin xaaladaha oo dhan, hubso in ciidda lagu qooyay si qoto dheer ah 25 cm. Qaadashada qoyaanka, waxaa lagula talinayaa in lagu daboolo walxaha leh mulch ama cufan madow. Qalabkani ma ogalaanayo horumarinta haramaha, marka lagu daro, ilaalinta ubaxyada iyo nooca berry ee dhirta laga bilaabo taabashada substrate qoyan. Natiijo ahaan, ma saameyn doonaan kallana.
Inta lagu jiro mudada fruiting
Khudradda ugu horeysa ee dhirta qoyan waxaa laga heli karaa bisha Juun. Laakiin qaar ka mid ah milkiilayaasha, thanks to waraabiyo awooda iyo Bacriminta, waayo, xilli ay soo ururin kartaa dhowr dalag. Waxaan weydiinnay sida ay u badan tahay in ay biyo berriga ku shubaan inta lagu jiro miro iyo dhirta berry.
Waxaa soo baxday in guusha noocan ah, mitir laba jibbaaran oo lagu beero hawada kulul waxay qaadan doontaa 25 litir oo biyo ah. On substrates ciidda muddadan, waxaa muhiim ah in lagu hayo qoyaan ah 70%, iyo dhago - oo ku saabsan 80%.
Ma taqaanaa? Cabbirka iyo midabka strawberries waxay saameeyeen waxyaabaha ku jira berry. Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in midabka cufan ee iftiinkiisu yahay calaamad cad oo ah xaddi badan oo fiitamiin ah.
Xasuuso in bareesooyinka ay gaar ahaan u baahan yihiin qoyaan marka ay sameeyaan Zelentsy. Sidaa darteed, kormeer shuruudda mulch oo ha u oggolaanin qolof qallalan si ay u sameeyaan dhulka. Bannaanka u badan waxay sameeyaan sanduuqyo gaar ah oo u dhexeeya saf, halkaas oo biyo lagu hagayo. Tiknoolajigaan ma halis u ah manka iyo ilaalinta berry ka soo kallana.
Waraabinta iyo quudinta
Isku daridda labadaas hab ee muhiimka ah ee strawberry ayaa ka shaqayn kara mucjiso. Dhaqanku wuxuu ku tiirsan yahay qaybaha macdanta ee substrate ah. Waxay si fiican u nuugaan xididada jawiga qoyan.
Ka hor inta aan la soo saarin waraaqaha, khubarada waxay ku talinayaan in sariirta la bacrimiyo iyadoo isku dar ah humus, superphosphate iyo ash xaabada. Hal mitir labajibbaaran oo ka mid ah sawirka, saamiga qaybaha waxaa lagu xisaabiyaa saamiga 3 kg: 35 g: 500 g Markaa waxaa muhiim ah in la dhigo humus yar ama la gooyey (laakiin aan cusubeyn) digada ceel kasta oo kasta.
Baro wax badan oo ku saabsan quudinta strawberry xilliga guga iyo dayrta.
Waa muhiim! Marka beeritaanka strawberries guga guga, waa lagama maarmaan ah in laga saaro caleenta qalalan iyo shaaribada ku ciil baxay ka sii dhexdhexaadinta safka ka soo saldhigyada.
Dhirta ugu horraysa waxaa la qorsheeyaa inta lagu jiro muddada uu duurka u bilaabayo inuu ka baxo caleemaha yaryar, dhererkoodu uusan ka badnayn 10 cm, kadibna xal 3 kg oo mullein qallalan ah, kaas oo ah in lagu qasi karo biyo oo lagu qiyaaso ilaa saddex maalmood, baaldi biyo ahna waa mid aad u habboon. Bedel ahaan, waxaad isticmaali kartaa faleebo digaag digaag. Bacriminta lagu soo celiyay ayaa la sameeyaa marka caws ubaxa laga soocayo goobaha. Inta lagu jiro muddadan, qiyaastii 20 g of ammonium nitrate kala diri baaldi biyo ah waa in lagu daraa xididka. Cabitaankani waa inuu ahaado mid ku filan 20-25 oo duurka ah. Haddii la rabo, waxaad hagaajin kartaa tayada iyo tayada badeecadaha ee berry adoo ku dari kara arrin baddan bilowga fruiting.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo koro dalagyada beeraha sida: blueberries, blueberries, sunberry, karamberriga, ciriiriga, raspberry iyo lingonberry.
Waqtiga quudinta soo socota ayaa imaan doonta oo keliya ka dib marka la soo ururiyo berry oo dhan. Marxaladdan horumarinta strawberry, waxaa lagu talinayaa in laga saaro caleenta hore ee saliida iyo in lagu daro kiimikooyinka sunta ah ee ka yimaada fungal iyo bakteeriyada inta lagu jiro waraabinta. Qalabka ugu fiican ee muddadan, bannaanka u tiro badan tixgeliyo xal saddex boqolkiiba ah ee daloolka potassium. Waa firfircoonida iyo bacriminta waxtar leh.
Waa muhiim! Noocyo Remontnye ee strawberries ku talin lahaa bacrimiya inta lagu guda jiro mawjada kasta ee formation of ugxan.
On sariiraha strawberry, whey ayaa si fiican u cadeeyay. Meelaha miyiga ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida fungicide, cayayaanka, iyo bacriminta. Dareerku wuxuu ka kooban yahay nitrogen, fosfooraska iyo potassium, iyada oo aan dhirta gebi ahaanba korin karin.
Noocyada waraabka waraabka
Marka la eego xaqiiqda ah in strawberries ay jecel yihiin qoyaanka ciidda badan, milkiilayaal badan, si aysan u qaadin baaldiyada biyaha laga buuxiyo, rakibidda waraabka biyaha ku jira dhulkooda. Intaa waxaa dheer, waxaa soo dhaweeyay khabiiro. Fikraddooda, iyada oo habkan loo waraabiyo dhirta muddo dheer waxaa la siiyaa qoyaan waxaana laga ilaaliyaa xadiga. Dareerku wuxuu ka yimaadaa xididada, ma aha mid xoqaya caleenta iyo ubaxyada, taas oo hoos u dhigeysa qatarta sunta iyo manka. Xayawaan adag oo walwal ah ayaa waligood ku sameysan carrada. Waxaad naftaada dhisi kartaa nidaam darbi. Tani waxay u baahan tahay tuubooyin, dhibco, bareeso, cadaadis cadaadis iyo bamka biyaha. Waxaa muhiim ah in rakibida la hagaajiyey ay xakameyn karto xoogga qoyaanka inta lagu jiro guntinta iyo sameynta berry. Urur ku habboon ee waraabka iyo bacarimiddu waa fure u ah beerista guuleysta ee strawberries. Waxaan rajeyneynaa in talooyinkayagu ay kaa caawin doonaan inaad gaarto tayo badan oo tayo sare leh.
Noocyo oo ah jeeriga macaan ee gobolka Moscow
Nooc canab ah pavlovsky
Geedka canabkiisa xilliga dayrta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Strawberries 2019